Apple, Google neMicrosoft vari kushanda pazvinhu zvitsva-zvishoma zvekupinda | Linux Addicts
Apple, Google neMicrosoft vari kushanda pazvinhu zvitsva-zvishoma zvekupinda
Darkcrizt | 09/05/2022 18:36 | Yakagadziridzwa ku 11/05/2022 22:15 | Noticias
Mukutaura kwakabatana kwakabudiswa neFIDO nguva pfupi yadarika, Apple, Google neMicrosoft vakati vachawedzera kuwedzera zviyero nyanzvi yekupinda pasina password, izvo zvaizobvumira vashandisi kupinda kune network masevhisi nenzira inonzwisisika uye yakachengeteka.
Uye ndezvekuti mapassword anokanganisa hacks uye anogona kunetsa kune vashandisi kubata. Kugadzirisa nyaya idzi, Apple, Google, neMicrosoft vanga vachibatsira kutungamira indasitiri-yekuedza kumisa kushandisa mapassword senzira yekutanga yekupinda mumaapp.
Iwo matatu mahofori etekinoroji anoronga kuvhura maficha matsva ekupinda ayo anobvumira vashandisi vawo kupinda muwebhusaiti kana app vasina kuisa password. Sekureva kwemakambani, vashandisi vanozokwanisa kupinda musevhisi nekungovhura mafoni avo.
Munzira yakambotaurwa yekupinda account yemawebhu masevhisi, Google neApple vakaronga nzira dzekupinda mumasevhisi akasiyana siyana nemaakaundi avo, uye Microsoft yakasimbisa zvitupa zvekupinda kuburikidza nemameseji eemail. .
"Kusaina pawebhusaiti pakombuta yako, unenge uchingoda foni yako padhuze uye iwe unongokumbirwa kuivhura kuti uiwane," akatsanangura kudaro Sampath Srinivas, director weGoogle wemanejimendi echigadzirwa kuti isimbiswe yakachengeteka, mune blog. post nhasi.. "Kana waita izvi, hauchazoda foni yako zvakare uye unogona kupinda nekungovhura komputa yako."
Naizvozvo, chinangwa chekugadzira FIDO chirwirangwe ndeyekugadzirisa matambudziko anokonzerwa nemaitiro echokwadi echinyakare yepassword kuburikidza nehunyanzvi. Inobvumira vashandisi kuti vabatane neakawanda masevhisi etiweki nekubatanidza Apple, Google, uye mamwe masevhisi maakaundi, uyezve shandisa aya maakaunti kuona masevhisi ekupinda masevhisi.
Uye zvakare, inogona zvakare kusanganiswa neiyo biometric identification nzira senge dijitari password (pincode), zvigunwe kana kumeso kuti zvizivikanwe, uye kunyangwe kuburikidza nenharembozha yemushandisi uye zvimwe zvigadziriso zvekuona chitupa, izvo zvinorerutsa kuoma kwekupinda kune akawanda. network masevhisi, uye zvakare inovimbisa kuvanzika uye kuchengetedzeka paunenge uchipinda.
Iyo nyowani isina password yekupinda maficha inosanganisira yakavakirwa-mukati yekudzokera kumashure meshini:
"Kunyangwe ukarasikirwa nefoni yako, makiyi ako anozobatanidzwa zvakachengeteka kufoni yako nyowani kubva kune gore backup, zvichikubvumidza kuti utore ipapo pakasiiwa mudziyo wako wekare," Srinivas akanyora.
kuuya kugona zvakavakirwa pahunyanzvi zviyero zvakagadziridzwa nemapoka maviri emaindasitiri, FIDO Mubatanidzwa uye World Wide Web Consortium. Apple, Google, neMicrosoft vakaita mabasa akakosha mukugadzira zviyero. Pamusoro pezvo, makambani anotoshandisa tekinoroji yekupinda isina password iyo yavakabatsira kusimudzira muzvigadzirwa zvakasiyana.
"Sezvo isu tichigadzira zvigadzirwa zvedu kuti zvive zvine hunyanzvi uye zvigone, isu tinozvigadzirawo kuti zvive zvakavanzika uye zvakachengeteka," akadaro Kurt Knight, mukuru weApple director wepuratifomu chigadzirwa chekushambadzira. "Kushanda neindasitiri kumisa nzira nyowani, dzakachengeteka dzekupinda dzinopa dziviriro iri nani uye kubvisa kusazvibata kwepassword kwakakosha pakuzvipira kwedu kuvaka zvigadzirwa zvinopa chengetedzo yepamusoro uye ruzivo rwemushandisi rwakajeka."
Pamwe chete nekuzivisa maficha ari kuuya, Microsoft yakawedzera password isina password yekutsigira kune maviri ezvipo zvayo. Yekutanga ndeye Windows 365 Cloud PC chishandiso, chinobvumira vashandisi kuyananisa maPC maapplication avo uye zvigadziriso pamidziyo yakawanda. Microsoft yakawedzerawo password yekugona kugona kune yayo Azure Virtual Desktop sevhisi, iyo inobvumira makambani kupa makore-based desktops kuvashandi vavo.
Microsoft inoronga kuita mamwe ekuwedzera cybersecurity mune ramangwana.
"Unogona kushandisa Windows Hello nhasi kusaina kupi zvako kunotsigira mapasscode, uye munguva pfupi iri kutevera, unokwanisa kusaina kuaccount yako yeMicrosoft nepasscode kubva kuApple kana Google mudziyo," akadaro Alex Simons, mutevedzeri wemutungamiri. mubatanidzwa chirongwa manejimendi timu muAzure chikamu cheMicrosoft Corp.
Apple, Google, uye Microsoft vari kushandawo kuita kuti mapuratifomu avo achengetedzeke nedzimwe nzira. Izvo zvitsva zvinotarisirwa kuwanikwa mukati megore rinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Apple, Google neMicrosoft vari kushanda pazvinhu zvitsva-zvishoma zvekupinda
Txema M akadaro
Izvi hazvisi "zvekurerutsira mushandisi" kana kudzivirira "matambudziko" (?) evashandisi kubata mapassword. Zviri pachena uye zviri nyore kuitira kuti zvese zviitwa panetiweki zvibatane nemushandisi chaiye, ane zita uye surname, zvichipedza kusazivikanwa.
Uye kwete, kusazivikanwa hakuna kuipa. Kana mumwe munhu akapara mhosva, mupi webasa wako anoziva IP yako uye anogona kuipa kumutongi, aine waranti. Kusazivikanwa hakuna kufanana nekusarangarirwa. Kupedza kusazivikanwa kunobvumira makambani akazvimirira kuti awane mukana weZVESE zviitiko zvako panetwork, pasina iwe kuziva chikonzero, kana kuti vanozvishandisira chii.
Pindura kuna Txema M
Modren Chitoro: Imwe Inoisa Kuvatonga Vese
Lambda Tensorbook: Laptop yakagadzirirwa kudzidza kwakadzama